RASMI: Liverpool oo shaacisay in Tababare Jürgen Klopp uu ogolaaday inuu heshiiska u kordhiyo Kooxda… (Imise sano ayuu saxiixayaa?) – Gool FM
Xaqiiqooyin aad u baahan tahay inaad ka ogaato kulanka caawa ay Chelsea mucjisada u baahan tahay ee ay booqanayso Bayern Munich
Muxuu ka yiri Zidane kaddib markii ay Man City u soo baxday wareega siddeeda ee tartanka UEFA Champions League?
RASMI: Liverpool oo shaacisay in Tababare Jürgen Klopp uu ogolaaday inuu heshiiska u kordhiyo Kooxda… (Imise sano ayuu saxiixayaa?)
Haaruun December 13, 2019
(Liverpool) 13 Dis 2019. Tababare Jürgen Klopp ayaa la soo sheegayaa inuu ogolaaday inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa Liverpool, waxaana uu u saxiixayaa heshiis ku eg illaa sanadka 2024-ka.
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa goordhow ku dhawaaqday in macallinkeeda Jürgen Klopp uu ogolaaday inuu qandaraaska u kordhiyo, isagoo aqbalay heshiiskiisa cusub oo shan sanadood ah oo kooxda ku sii haynaya illaa sanadka 2024-ka.
52-sano jirkaan ayaa ku muteystay in heshiis cusub ay u soo bandhigto kooxda kaddib horumarintii uu ku sameeyey Naadiga ka dhisan Magaalada Liverpool, isagoo labo xilli ciyaareed oo xiriir ah gaarsiiyey final-ka Champions League, iyadoo kal ciyaareedkii ugu dambeeyey uu u gacan geliyey Koobka UEFA Champions League.
Xilli ciyaareedkii 2018-19 ayuu koobka Champions League ku hoggaamiyey Reds kaddib markii kulankii final-ka ay guul 2-0 ah ka gaareen Tottenham Hotspur, inkastoo Final-kii kaas ka horreeyey ee ka dhacay magaalada Kiev ay guuldarro 3-1 kala kulmeen Real Madrid oo sidaas ku qaaday Koobka Horyaallada Yurub.
Sidoo kale Klopp ayaa horyaalka Premier League looga qaaday hal dhibic oo qura xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, isagoo haatan hoggaanka u haya horyaalka Ingiriiska, isla markaana doonaya inuu kooxda Reds ku hoggaamiyo hanashada horyaalka muddo 30 sano ah kaddib.
Klopp ayaa loo magacaabay macallinka Kooxda Liverpool 08 bishii October ee sanadkii 2015-kii, safarkiisa maamul ee kooxda ka arrimisa garoonka Anflied ayuuna halkiisa ka sii wadi doonaa shanta sano ee soo aaddan, marka uu heshiiskan cusub qalinka ku duugo.
We’re delighted to announce Jürgen Klopp has agreed a contract extension 😍 https://t.co/Eg13Fjj3Ek
Waatee kooxda kalsoonida ku qabta inay sameyn doonto saxiixa Jadon Sancho bisha Janaayo?... (Ma Barca, Real, Man Utd mise Liverpool?)
RASMI: Xiddiga ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa bishii November ee Premier League oo la shaaciyey